Karal Markis (Dhalashada: 5ta Maayo 1818, Dhimashada: 1883) Wuxuu udhashay wadanka Jarmalka, waxa uu ahaana faylasuuf, beecmushtar, faylasuuf siyaasadeed, cilmi bulshad yaqaan, saxafi, iyo kacaan kiciyaha bulshada.
Wuxuu ku dhashay magaaladda Tareer oona ka dhashay reer dhaqan. Kadibna wuxuu bartay siyaasadda maaliyadda iyo falsafadda hegelian. Isagoo da' dhexe ah sharci la'aan ayaa ku dhacday Markis kadibna uu daganaa magaaladda london ee ingiriiska meeshaasayto uu kula kulmay faylasuuf Jarmal ah oo loo yaqaan Friedrich Engals uuna fakarkiisana uu ku balaarinayay. Faylasuufka Friedrich oo qoray oona daabacy dhawr buug, midka aad loogu yaqaan uu yahay "1848 pamphlet The Communist Manifesto".
Human Rule Weighed in the Balances.Part 6​—Blackshirts and Swastikas
markii uu maqaalo ku qoray jariirada looyaqaano Rhenns sietfun ee kasoo bixi jirtay xiligaas magaalada Köln ee wadanka Jarmalka waxa uu kamid noqday tafaftirayaasha jariiradaas waxa uu kadib kahadlay oo uu wax kaqoray xaaladihii ay markaas ku sugnaayeen mujtamicii uu lanoolaa sanadii 1843 ayaa loosheegay in uu dib ula noqdo mid kamid ah qoraaladiisii uu jariiradaa ku qori jiray. Isla markiiba jariiradii waa laburburiyay isna waa loo hanjabay kadib wuu katagay jarmalka waxa uuna tagay magaalada Paris ee dalka France. Halkaas ayuu aad ugu dhexgalay mawduucyada falsafada Siyaasadda iyo qaar kale oo badan. waxa uu laakiin aad uga soo horjeeday diinaha oo waxa uu aaminsanaa in diinta iyo nolosha dadku aanay isku darin. diintuna ay horumarka hor taagan tahay, Karl Marks waxa uu leeyahay ama loosameeyay taalooyin aad ubadan uu kuyaala wadama badan oo reer yurub ah.
Karl Marx waxa uu halgan aad iyo aad udheer la galay waxa amaba mabda looyaqaano Liberalinimoada
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Karl Marx.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Marx&oldid=223702"
Last edited on 10 Nofeembar 2021, at 16:07
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Nofeembar 2021, marka ee eheed 16:07.